Fideuá - धेरै सरल घरेलु नुस्खा | ThermoRecines
पास्ता25 मिनेट4 व्यक्ति350२ क्यालोरी
यो फिदेआ यो मेरो आमाको आविष्कारको कुरा हो कि हामीले ती दिनहरूमध्ये एक गर्यौं जब उनीहरू आफ्ना नातिनातिनीहरूलाई भेट्न आए र उनलाई खाजाको लागि के तयारी गर्ने भनेर वास्तवमै थाहा थिएन। हामीले गर्यो कुखुराको टुक्राहरू र झींगाको साथ मिश्रित, र परिणाम यो थियो कि हामी सबैले यसलाई प्रेम गर्‍यौं।
यो फिदेउमा अत्यधिक सामग्रीहरू छैन, यो थिएन र, मैले पहिले नै उल्लेख गरेको कुखुरा र झींगा बाहेक, यसमा पास्ता, आधारभूत तरकारीहरू र आधारभूत शोरबा.
सत्य यो हो कि त्यहाँ राम्रो कुकको अनुभव जस्तो केहि छैन, जोसँग सबै थोक भएको राम्रो मानिस छैन, तर आफूसँग भएको सबै चीजहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई थाहा छ। तपाईको सल्लाहका लागि धन्यवादी आमा!
स्वादिष्ट समुद्री र हिमाल फिडुide कुखुरा र झींगाले बनाएको। यो एक tupperware खाना को रूप मा सही छ।
G० ग्राम हरियो मिर्च
G० ग्राम रातो खुर्सानी
50 कुचल टमाटर (प्राकृतिक वा क्यान्ड)
300 ग्राम कुखुरा (साना टुक्रा मा)
Vegetable०० ग्राम तरकारी ब्रोथ वा नुनिलो पानी
Fideuá को लागि २ g० नूडल्स
खुलेको चामलको झींगाको १ g० ग्राम
केसरका केही थ्रेडहरू
खाना रंगको एक चुटकी
गिलासमा लसुन, प्याज र खुर्सानी राख्नुहोस्। हामी प्रोग्रामिंग द्वारा काट्छौं Seconds सेकेन्डको गति।।
तेल र टमाटर थप्नुहोस् र पकाउनुहोस् १ minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति १.
त्यसो भए, हामी ब्लेडमा पुतली राख्छौं र कुखुरा थप्दछौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, १००º मा, बाँया पालो, चम्चाको गति।
हामी नुनको साथ शोरबा वा पानी थप्छौं र हामी प्रोग्राम गर्दछौं Minutes मिनेट, १००º मा, बाँया पालो, चम्चाको गति।
त्यसो भए हामी फेडुइ र केसरको लागि चाउचाउ थप्दछौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, १००º, बाँया पालो, चम्चाको गति।
जब समय सकियो, हामी यसलाई नुनलाई सुधार्ने र झिंगनहरू थप्न प्रयास गर्दछौं, यसलाई प्रोग्रामिंगमा बदल्दै Minutes मिनेट, १००º, बाँया पालो, चम्चाको गति।
हामीले सामग्रीलाई कचौरामा राख्यौं र यसलाई केही मिनेट आराम गर्न दिनुहोस् ... र यो सेवाको लागि तयार छ।
थप जानकारी - आधारभूत विधि: द्रुत तरकारी र कुखुराको ब्रोथ
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: चामल र पास्ता
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » चामल र पास्ता » फिदेआ
मैले भर्खरै भोलि खानको लागि यो डिश बनाएको छु, र यो केवल "अद्भुत र स्वादिष्ट" थियो। मेरो जेठो छोराले उसलाई डिनरको लागि चाहन्थे, हा हा हा, उसले भोलि पर्खन सक्दिन भन्यो।
कस्तो राम्रो, अना! हामीलाई हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद। शुभकामना।
नमस्ते साथीहरु, म तपाईलाई फेरि भेट्न गएँ, मेरो कम्प्युटर केहि दिन बाहिर थियो हाहाहााहा, तर हामीले यसलाई पुन: प्राप्ति गरेका छौं। भोलि हामी यो फिडुइ खाने छौं, म यसलाई सामान्यतया प्याला प्यानमा बनाउँछु र म यसलाई प्रयास गर्न जाँदैछु। tm। म तिमीलाई भन्दछु …… चुम्बन …… .. ..
माईलिडिसलाई जवाफ दिनुहोस्
आशा छ तपाईंलाई यो मनपर्दछ, माइलेडिस। तपाईं हामीलाई भन्नुहुनेछ। शुभकामना।
मैले केहि समय अघि तपाईको ब्लग पत्ता लगाएँ ... र सत्य यो हो कि म हर्षित छु। प्रत्येक डिशको बारेमा तपाईले राख्नुहुने टिप्पणीहरू मेरोलाइ धेरै उपयोगी देखिन्छ।
आज केहि साथीहरू हाम्रो घरमा खाने र पहिलो पटक फिडुइ बनाउन आएका छन्। हामी सबैले यो स्वादिष्ट लाग्यो !!! कुखुराको सट्टामा, मैले माछा र स्क्विड टुक्राहरूमा राखेको छु ... शानदार !!!
माछा र स्क्विडको साथ कती राम्रो! म यसलाई प्रयास गर्छु। क्रिस्टिना, हामीलाई हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र मलाई आशा छ कि तपाईं हाम्रो रेसिपीहरू मनपराउनुहुन्छ। शुभकामना।
एक हप्ताका लागि थर्मोमक्क्स राख्दै (मेरो केटाको जन्मदिनको रिकल), मैले फिडुआ बनाउन शुरू गरें, केवल स्क्वीडको लागि कुखुरा बदलेर, र यो नेत्रहीन ,,,,,,, तरकारी जस्तै भील जस्तै बनेको छ।
थप्नुहोस् कि यो ब्लग, यसको व्यंजनहरू, अघिल्लो प्रस्तुतीकरणहरू पढ्न पाउँदा आनन्द लाग्दछ।
धेरै धेरै भर्जिनिया धन्यबाद र स्वागत छ। मलाई आशा छ कि तपाइँ यो धेरै प्रयोग गर्नुहुनेछ र तपाइँ हाम्रो रेसिपीहरू मनपराउनुहुनेछ। शुभकामना।
नमस्कार फेरी, मैले फेडेगुआसका लागि नुस्खा बनाएको छु र ती धेरै धनी छन्, मैले केवल अलि बाक्लो छोडेको फोटोमा जस्तो छाडिएको छैन, केवल परिवर्तन गरिएको छ कि टमाटर हो, मैले टमाटर राखें एउटै रकममा केन्द्रित भएमा यसले के नुस्खामा राख्दछ? यो त्यो हुनेछ, धन्यबाद
उपत्यकालाई जवाफ दिनुहोस्
भोले, हुनसक्छ यो टमाटर हो जुन तपाइँले उल्लेख गर्नु भयो, तैपनि फिडुइ सूपी होईन, तर म कल्पना गर्दछु तपाइँ मोटा भन्न चाहानुहुन्छ।
अर्को टमाटरको साथ फेरि प्रयास गर्नुहोस् र तपाईं मलाई भन्नुहुनेछ। शुभकामना
मैले यसलाई आज रातीको खाजाको लागि बनाएँ र मैले अफिसमा ट्युपर लिएँ र बसमा दाबी गरे पनि, यो निकै रमाइलो थियो।
मैले कुखुरा थप्न सकेन, केवल झींगा।
कुनै समय मा तपाईं संग एक महान पकवान छ।
पाक सल्लाहका लागि धन्यवाद।
शुभकामना क्रिसमस पूर्वानुमान र टेबलमा फोटोहरू राम्रा हुन सक्छन्
धन्यबाद भिक्टोरिया हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा, मलाई खुशी छ कि तपाईंले फिडेसलाई मनपराउनुभयो। मुबारक छुट्टीहरु !!
हिजो मैले यो फिडुआ बनाएको थिएँ, माछाको थोपाको लागि पानी बदलेर, केही स्क्विड, टुक्रा र झींगामा सानो माछा, र अन्त्यमा केही सिपी र तपाईंले देख्नुहुन्न, स्वादिष्ट, हामीले "आफ्ना औंलाहरू चाटेका छैनौं। "माफीको साथ, किनकि हामीले काँटा प्रयोग गर्यौं। धन्यवाद, म तपाईंको रेसिपीहरू धेरै बनाउँछु, एक सानो चुम्बन।
ती सबै धनी सामग्रीहरूको साथ, कुनै आश्चर्य छैन कि तिनीहरूले तपाईंलाई आफ्नो औंलाहरू कोख पाउन चाहन्थे। सुझावका लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
हिजो मैले मेरी छोरीको जन्मदिनको लागि फिडुआ बनाए, मैले उनको काटिएको स्पेगेटी (ग्लूटेन-फ्री) बनाएर एउटा मात्र कुरा भन्न सक्छु कि त्यहाँ केहि बाँकी छैन, हामी यसलाई माया गर्थ्यौं। धन्यबाद। अभिवादन
म धेरै खुसी छु अरोरा कि तपाईंलाई यो मनपर्दछ र तपाईंको छोरीलाई बधाई छ।
मारिया Azucena भन्यो
फिदेवु महान, यो यति बाहिर आयो कि मैले मेरो बहिनी र परिवारलाई खान बोलाउनु पर्यो। म छोटो समयको लागि थर्मोमिक्स प्रयोग गर्दैछु, र मेरो लागि यो पृष्ठ खोज्नु कल्पित छ, किनकि व्यंजनहरू धेरै प्राकृतिक छन्। म तपाइँलाई यो जारी राख्नको लागि प्रोत्साहित गर्दछ, किनकि हामी मध्ये धेरैको लागि यो मोतीबाट आयो। खुशी हुनुहोस्, र धेरै धेरै धन्यवाद।
Mª Azucena लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईको प्रोत्साहनका शब्दहरू र हामीलाई अनुसरण गर्नका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। शुभकामना
कति जना मानिसहरूलाई पकाउने हो? म कल्पना गर्छु कि for को लागि…।
माउसलाई जवाफ दिनुहोस्
हो4व्यक्तिको लागि। मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ। शुभकामना
नमस्ते, म इसाबेल बार्सिलोनाको एउटा शहरबाट हुँ, Caldes de Montbui, र मेरो पतिले तपाईंको ब्लग पत्ता लगायो। संयोगवश, सत्य यो हो कि म तपाईंको व्यंजनहरूसँग मोहित भएको छु किनकि ती बनाउन धेरै सजिलो छ र ती स्वादिष्ट छन्। मैले धेरै केकहरू बनाएको छु र उनीहरू स्वादिष्ट थिए र यस शनिबार मैले फिडु बनाएँ र यो स्वादिष्ट थियो, राख्नुको सट्टा यसमा कुखुरा मैले स्क्वीड राखें र यो कल्पित थियो। तपाईंको ब्लग पत्ता लगाउनु अघि। मैले Thermomix मा धेरै ध्यान दिएन किनकि पुस्तकमा रेसिपीहरू मेरो लागि व्यावहारिक थिएनन, न त मैले इन्टरनेटमा भेट्टाए। तपाईलाई भेट्न पाउनु कत्ति भाग्यमानी! अब म Thermomix संग पकाउन मन पर्छ। एउटा प्रश्न। म पिज्जाको लागि आधार बनाउन चाहन्छु र मैले तपाईंको नुस्खा देखेको छु तर म यसलाई खमीर बिना नै बनाउन चाहान्छु, इन्टरनेटमा खोजेको छु कि यो भिचीसँगै बनाउन सकिन्छ, यो तपाईको समान रेसिपी हो तर थपेर पानी, तपाईले यसमा भिचि राख्नुहुन्छ र मलाई थाहा छैन यसमा खमीर राख्छ। के तपाईंलाई लाग्छ कि यो राम्रो देखिन्छ? आलिंगन र म तपाइँलाई तपाइँको ब्लग मा जारी राख्न को लागी पनी व्यंजनहरु यति सजिलो र राम्रो बनाउन को लागी प्रोत्साहित गर्दछ। धन्यवाद।
इसाबेल, मसँग कहिल्यै पिच पिठो भएको थिएन, तर मैले यो सुनें। प्रयास गर्नुहोस् कि म कल्पना गर्छु कि यो तपाईंलाई राम्रो लाग्नेछ र कसरी हामीलाई भन्नुहोस्।
भव्य शानदार फिदेआ म तपाईको सबै चीजहरू जस्तै गर्दछु, अर्को दिन त्यो उस्तै वा राम्रो थियो, चुम्बन
मार्सेलिनालाई जवाफ दिनुहोस्
अन्त्यमा म यसमा कमेन्ट गर्दिनँ तर अहिले म तिमीलाई भन्दछु कि अनौपचारिक ..... मेरा अपराधहरू!
MILEIDIS लाई जवाफ दिनुहोस्
Goodiiiiiisima केटीहरू !!! म तिमीलाई बधाई दिन्छु। मैले आज यो पकाएँ र यो स्वादिष्ट थियो। मैले खाना पकाउन फिडु á बढी मिनेट छोडेको छ किनकि यो अलि कडा भयो। मेरो बधाई !! मैले बनाएको सबै रेसिपीहरू अति उत्तम छन्। धन्यबाद।
शुभ दिउँसो! भोलि म यो धेरै रमाईलो फिडेना बनाउँदैछु, मेरो प्रश्न हो; के झींगा त्यस्तो हुन सक्छ जुन पहिल्यै जमेको छ? के म तिनीहरूलाई पहिले फ्री-फ्रिज गर्ने वा तिनीहरूलाई सिधा टास गर्नु पर्ने थियो?, र म तपाईंलाई केही चीजहरू सोध्ने मौका लिदै छु, हे, हे; खुट्टाको साथ स्क्विड पनि बनाउँनुहोस्, स्क्विड पनि स्थिर गर्न सकिन्छ? धेरै धेरै धन्यबाद, र मैले दोहोर्याउनु पर्छ कि मलाई तपाईंको ब्लग मन पर्छ र उहाँलाई धन्यवाद मलाई भान्सा र थर्मोमिक्स धेरै मनपर्‍यो। चुम्बनहरू।
एएचएच !! अर्को प्रश्न थियो; के तपाईंलाई पोर्क गालका लागि कुनै विधि बनाइएको छ जुन थर्मोमिक्समा बनाउन सकिन्छ? धन्यवाद र चुम्बन।
नुरिया, मैले यो तपाईको लागि फेला पारेँ, यदि तपाईंले यसलाई हेर्नुहोस भने हामीलाई भन्नुहोस्।
त्यहाँ कुनै समस्या छैन, जबसम्म तपाईं फ्रिज गरिएको झींगा वा स्क्विड प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर तिनीहरूलाई पहिले पग्लन दिनुहोस्।
नमस्कार केटीहरू, सबैभन्दा पहिले यी स्वादिष्ट व्यंजनहरूको लागि धन्यवाद। मेरो प्रश्न, त्यहाँ हामी दुई जना घरमा थोरै खाना पकाउनको लागि छौ? आधाdअवयवहरु संग के व्यंजनहरु उस्तै हुनेछ? यसले आधा समय पनि लिन सक्दछ? पानी कम गर्ने? म मेरो थर्मोमिक्सको साथ धेरै दिनको लागि छु र मेरो अभावको कमी छ। अन्तिम शंका जब कुखुराको लागि स्क्विड प्रतिस्थापन गर्दा कुखुराको लागि समान समयमा Q प्रयोग हुन्छ ??? मलाई आशा छ केहि उत्तर, धन्यबाद।
नमस्कार, तपाईंको नुस्खाका लागि धन्यबाद, यो अति उत्तम छ र सबैजनाले यसलाई धेरै मन पराउछन्।
म यो जान्न चाहन्छु कि यो कसरी थर्ममा गर्न सकिन्छ। २१, किनकि यो मेरो आमाले गर्ने मेशिन हो र मलाई यो थाहा छैन कि यसलाई कसरी बनाउने भनेर।
म तपाईंको उत्तरको लागि कुर्नेछु, धेरै धेरै धन्यवाद
IRENE लाई जवाफ दिनुहोस्
इरेन, टि.एम. २१ का साथ तपाईले पकाउने विधि पनि बनाउन सक्नुहुन्छ जब यसलाई स्पीड and र १/२ मा क्रश गर्न भन्छ। र जब यसले बायाँ, चम्चाको वेगमा मोड्छ, TM-21 को साथ तपाईले ब्लेड र गति १ मा पुतली राखेर गर्नु पर्छ। बाँकी उस्तै हो।
वर्षौं अघि उनीहरूले मलाई थर्मामिक्स टी २१ दिए र सत्य यो हो कि मैले यसलाई धेरै प्रयोग गरेको छैन तर अब मैले तपाईंको ब्लगमा हेरेको छु कि उनीहरू मलाई धेरै व्यंजनहरू बनाउन चाहन्छन्, मेरो प्रश्न यो हो कि यदि तपाईंले प्रकाशित गर्नु भएका सबै व्यक्तिहरू हुन् भने T21 संग गर्न र यदि हो भने, यो के हो T31 बाट परिवर्तन हुन्छ र म कसरी रूपान्तरण गर्न सक्छु? धन्यबाद र तपाईको व्यंजनहरुमा बधाई। फोटोहरुमा हेर्दै मलाई ती सबै गर्न बाध्य पार्छ!
योल्यान्ड, हामीसँग टीएम -११ छ त्यसैले हाम्रा अधिकांश व्यंजनहरू त्यो मोडलका लागि हुन्, यद्यपि तपाईं विशाल बहुमत बनाउन सक्नुहुन्छ, केही चीजहरू परिवर्तन गरेर।
जब हामी भन्छौं: "बायाँ घुम्नुहोस्, स्पून स्पीड", तपाईंले पुतलीलाई ब्लेड र गति 1 मा राख्नुपर्छ। जब हामी5मा क्रश भन्छौं, तपाईंले31/2 मा क्रस गर्नुपर्छ। ती केहि परिवर्तनहरू हुन् जुन तपाईंले गर्न आवश्यक छ।
ठीक छ सिल्भिया धेरै धेरै छिटो जवाफ दिन को लागी तपाईलाई धेरै धन्यवाद छ, भोली म आफूलाई यो फिदेवा बनाउन हौसला दिन चाहन्छु, र म पनि दही र चकलेट ज्वालामुखी र ... संग चकलेट केक बनाउन चाहन्छु। राम्रो छ कि तपाइँले मलाई थर्मोमिक्सको साथ फिर्ता राख्न मलाई प्रोत्साहित गर्नुभयो!
खैर, सिल्भिया, तपाईंसँग पोष्ट गरिएको कुखुराको लागि कुनै विधि छ? मलाई यो गरेको जस्तो लाग्छ तर मैले कुनै पाउन सकिन।
योलान्डा, मसँग कुनै छैन, तर मलाई केहि सामग्री दिनुहोस् यसले के भन्छ र हेर्नुहोस् यदि हामी एउटा विधि पाउँदछौं भने।
ठिक छ, मलाई वास्तवमा थाहा छैन, तर मलाई लाग्दछ कि कुखुरा, प्याज, लसुन, वाइन, मलाई थाहा छैन त्यहाँ कुनै जडिबुटी छन्, आलु…। धन्यवाद सिल्विया !!
एउटा प्रश्न, कुन नूडल्स मैले प्रयोग गर्नु पर्छ?
बेटी, फिडुá प्रयोग गरिएको छ, जसलाई पास्ता भनिन्छ। र यदि छैन भने सबैभन्दा बढी संख्याको केहि नूडल्स तपाईंले फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
मैले शुक्रबार यो विधि बनाएँ र कस्तो सफलता! मेरो श्रीमान्‌ भन्छन कि यो एकदम राम्रो फिदेआ हो जुन उसले लामो समय खायो र यदि यो मेरो बच्चा हो भने उनीहरूले आफ्नो औंलाहरू चुस्नुभयो। यी व्यंजनहरुका लागि धेरै धेरै धन्यबाद। हामीलाई थर्मोमिक्स प्रयोग गर्न को लागी।
म तपाईंलाई धेरै मन पराउँछु कि धेरै खुसी छु। सत्य छ कि महान बाहिर आउँछ।
नमस्ते, म यहाँ वरिपरिको नयाँ छु र म तपाईंलाई बधाई दिन चाहान्छु, तपाईलाई थाहा छैन कि तपाईका व्यंजनहरू मेरो लागि कत्ति राम्ररी छ, फिडुआ केवल नेत्रतल दर्शनीय हो मैले समाप्त गरेपछि सोचेँ कि यो सुस्त हुनेछ तर अन्त्यमा यो ठूलो धन्यवाद थियो। केटीहरु एक सलाम
ठिकै छ, आज मसँग यो फिडु बनाउनको लागि सबै चीजहरू छन् जुन राम्रो देखिन्छ, मसँग पहिले नै ब्रोद बनाएको थियो हिजोदेखि तर म यसमा केही मटर हाल्ने सोचिरहेको छु कि मलाई उनीहरू चावलमा र फेडुमा फेला पार्न मन पराउँछन्। क्यानरी टापुहरू यो पनि सामान्य रूपमा थपिन्छ म तपाईंलाई कसरी तिनीहरू बाहिर आउँछु भनेर बताउनेछु। पृष्ठ केटीहरु को लागी धन्यवाद सबै धनी धनी।
म पक्का छु कि मटरको साथ यो पनि धेरै राम्रो छ, यो फिडुसँग राम्रोसँग जान्छ ...
धेरै राम्रो, मैले केहि दिन अघि यो गरें र हामीलाई वास्तवमै यो मनपर्‍यो। म यस ब्ल्गमा तपाईंलाई बधाई दिन यो अवसर लिन्छु। राम्रो। बिसिटोस डि उना टिनरफिएस।
मिलालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते केटीहरू, यस फिडुआको साथ गजबको सफलता जसलाई मैले fideua »land and sea» नाम दिएको छु मसँग दुईवटा कुखुराको ड्रमस्टिकको साथ एउटा टेपर थियो, त्यहाँ केही थोप्लो झिङ्गे मिर्च पहिले नै सुरु भयो, जानुहोस् म त्यहाँ सबै सामग्रीहरू फ्रिज छोरीको वरिपरि छरें। त्यो सरसफाई राम्रो छ तर राम्रो कुरा यो होइन कि सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि मेरो श्रीमानले यसलाई धेरै मन पराउनुभयो त्यसैले एक पटक फेरि ब्लगको रेसिपीहरू म तपाईंलाई भन्न गइरहेको छु तपाईं जस्तै अद्भुत चुम्बन धन्यवाद।
नमस्कार, मैले एउटा टिप्पणी पढेको छु जुन उनीहरूले स indicate्केत गर्दछ कि फिदुआ थोरै बाक्लो भएको छ, सत्य यो हो कि मलाई पनि त्यस्तै भएको छ र तपाईं टिप्पणी गर्नुहुन्छ कि यो केन्द्रित टमाटर प्रयोग गरेर भएको हुन सक्छ, हो कि कुचुरिएको टमाटर प्रयोग गर्नको लागि सब भन्दा सिफारिश गरिन्छ? र अर्को सानो कुरा, जब सम्म हामी सबै पानी पकाउन सम्म सबै चटनी बनाइन्छ, यो कचौरा हटाउन उत्तम छ वा छैन, यसलाई बाक्लो हुनबाट जोगिन वा यसलाई यससँग केही गर्नुपर्दैन। सत्य यो हो कि तपाइँको फोटोको साथ केहि गर्नका लागि पर्याप्त पास्टी थिएन।
एलिसिया, म सामान्यतया कुचिएको प्राकृतिक टमाटर प्रयोग गर्दछु र प्यालालाई सॉसमा छोड्दछु ताकि यो धेरै सुक्दैन। तपाईं थोरै थप तरलता थप्न सक्नुहुन्छ र कहिलेकाँही यो फिडुको ब्रान्डमा निर्भर गर्दछ, केही ब्रान्डहरू अन्यहरू भन्दा बढी तरल पदार्थ लिन्छन्।
नमस्ते सिल्भिया, तपाई मलाई बताउन सक्नु हुन्छ कि तपाईं कुन ब्राण्डको फिडेउ प्रयोग गर्नुहुन्छ?
तपाईको शीघ्र प्रतिक्रिया को लागी धन्यवाद।
एलिसिया, मलाई माफ गर्नुहोस्, तर म एउटा विशेष ब्रान्ड प्रयोग गर्दिन तर सुपर मार्केटमा समातेको पहिलो हो र मैले आफैंलाई याद गरेन, विशेष गरी एउटाको बारेमा बताउनको लागि। अर्को पटक म बढि ध्यान दिनेछु।
मैले शनिबार र स्वादिलो ​​बनाएँ। मेरा छोरीहरूले तिनीहरूलाई माया गर्थे। मात्र भन्नुहोस् कि तपाईंले खाना पकाउने सामग्रीहरूको बीचमा रंगहरू थप्न सक्नुहुन्छ किनभने यस कम्पोनेन्ट बिना फिडुaथोरै फिक्का हुन्छ
भन्यो र रोसियो, मँ तपाईका सुझावहरु स्वीकार गर्दछु र मलाई लाग्छ कि यसले सबैलाई थप दृष्टि दिनेछ, यो पहिले नै परिवर्तन भएको छ।
नमस्कार एलेना, बधाई !!! यो riquissssssiiiiiimmmmmaaaaa !!!
मेरो पति र मेरा बच्चाहरूले यसलाई मन पराउँछन् !!!
अंगालो र मलाई तपाइँको व्यंजनहरु मनपर्दछ
धेरै सान्द्रा धन्यबाद!
रिकुसिआइइइइइइइइइइइइइइइइइइइआइमाआआआआआआआ। म सबैलाई सिफारिस गर्दछु।
धन्यबाद तपाईलाई ब्लगको लागी, मसँग एक महिनाको लागि थर्मोमिक्स छैन र मैले जे पनि गर्छु सबै आकर्षक छ। तपाईलाई पक्कै पनि धन्यवाद 🙂
गालिसियाबाट आएको एक धेरै मोटो बाइको (कृपया त्यस्ता राम्रा रेसिपीहरू राखिरहनुहोस्)
खैर, हिजो मैले गुलाबी पैन्थरको हात बनाएँ र तपाईं यो कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न कि यो मेरो परिवारसँग कस्तो राम्रो देखिन्छ
एम्मा कत्ति अद्भुत छ, म खुसी छु कि तपाई एक महिना मात्र तपाईले त्यस्तो विस्तृत कार्यहरू गरिरहनुभएको छ, महाराजलाई बधाई! र हामीलाई दिनहुँ पछ्याउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म्याड्रिडदेखि गलिसियाका लागि बधाई छ (मेरो प्रेमीको परिवार गलिसियाबाट आएको छ र म त्यहाँ धेरै जान्छु, कस्तो सुन्दरता)।
नमस्ते! मैले भर्खर फिडुआ बनाएको छु। धेरै राम्रो! तर मसँग एउटा "समस्या" भएको छ: मेरो पुतलीलाई रंगले हरियो रङ्ग गरिएको छ! के कसैलाई रङ पुनर्स्थापना गर्ने युक्ति थाहा छ?। धन्यवाद
Hehehe Patricia, म डराउँदिन। मेरोसँग र color छ जुन चामलको केसरबाट पहेंलो देखिन्छ। यदि तपाईंले यसलाई डिश वाशरमा राख्नुभयो भने यो बिस्तारै हराउनेछ ... शुभकामना!
आज मैले यो नुस्खा बनाउने प्रयास गरेको छु, के हुन्छ भने चाउचाललाई बढी पानी वा शोरबाको आवश्यकता पर्‍यो, त्यसैले तपाईंले राख्नु भएको समय बितिसकेपछि मैले अलि अलि थपेको थिएँ ... तैपनि, यो स्वादिष्ट थियो !! !
यस्तो राम्रो र सजिलो रेसिपीहरूको लागि अ h्गालो र धन्यवाद
मिरीलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मिरी, कहिलेकाँही त्यसो हुन्छ किनकि हरेक चाउचाउ ब्रान्ड फरक छ (यो चामल जस्तै हो)। हामी यहाँ केहि निर्देशनहरू दिन्छौं, त्यसैले के म अर्को पटक सिफारिस गर्दछु कि तपाइँले समय नउडल प्याकेजमा भन्छ कि राख्नुहुन्छ र पानी / शोरबा थप्न हामी सधैं समयमै हुन्छौं। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद!
रोगुइकार १ भन्यो
नमस्ते, म जान्न चाहन्छु कि यदि कुखुराको सट्टामा, हामी माछा, राम्रो मान्छे, सम्राटको साथ फेडुइ बनाउन चाहन्छौं ... कुन समयमा हामीले त्यसलाई राख्नुपर्दछ र कति समय सम्म। अग्रिम धन्यवाद।
Roguicar1 लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार! समुद्री खाना फिडुइका लागि यो विधि यहाँ छ: http://www.thermorecetas.com/2012/04/02/fideua-marinera/
यदि तपाईं केहि माछा पनि थप्न चाहानुहुन्छ, सानो टुक्राहरूमा राख्नुहोस् जब त्यहाँ minutes मिनेट हुन्छ जब सम्म यो अप हुन्छ।
तपाइँले हामीलाई भन्नुहुनेछ यो तपाइँको लागि कसरी काम गर्दछ। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद!
सत्य यो हो कि यो फिदुआ जस्तो देखिँदैन, केवल चाउचाउ मात्र हो! यदि तपाईं माछा शोरबा छैन भने !!!
Marcresmas लाई जवाफ दिनुहोस्
यस अवस्थामा हामी सब्जी वा कुखुराको ब्रोथको साथ फिदेउ प्रस्तुत गर्दछौं। तपाईं यहाँ समुद्री फिडुउ पाउनुहुनेछ: http://www.thermorecetas.com/2012/04/02/fideua-marinera/
नमस्कार !! मलाई थाहा छ कि यदि पछिल्लो मोडेलको थर्मोमिक्स राम्रोसँग आयो भने के नुस्खा राम्रोसँग बाहिर आउँदछ, किनकी म बाँया मोड छैन? कृपया मलाई धेरै व्यंजनहरू थाहा पाउनु आवश्यक छ जुन तपाईंले मलाई यहाँ प्रस्ताव गर्नुभयो। धन्यबाद
जब तपाईं बाँया पट्टि घुम्नुहुन्छ, पुतली राख्नुहोस्, र 31१ को लागि यदि तपाईं चम्चाको गति २१ मा राख्नुहुन्छ भने यो गति १ हुनेछ। यो यसरी बाहिर आउँनेछ। हालसालै हामी प्रत्येक रेसिपीको अन्त्यमा समानताहरूको तालिका थप्दैछौं (आजको कुकीजमा यो पनि छ)। तपाईं यसलाई परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ कि यो पक्कै तपाईंको लागि उपयोगी छ।
त्यसोभए तपाईले हामीलाई यो बताउनु हुन्छ कि यो तपाईलाई कसरी मिल्छ।
हामीले आज यो खानको लागि गरेका छौं र नतिजा…। राम्रो! म यसलाई मेरो रेसिपीहरूमा पठाउँछु। धन्यवाद।
एस्ट्रेलालाई जवाफ दिनुहोस्
राम्रो तारा! तपाईको टिप्पणी को लागी धेरै धन्यबाद 🙂
राम्रो तारा! धेरै धेरै धन्यबाद 🙂
येशू Alcocer भन्यो
एक प्रश्न, झींगा जब यो फ्याँकिएको छ? कसले यो राख्दैन
येशू एल्कोसेरलाई जवाफ दिनुहोस्
मारिया Carrasco लोपेज भन्यो
शानदार, स्वादिष्ट र सजिलो। एक चमत्कार! धन्यवाद
मारिया क्यारास्को लोपेजलाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यवाद मारिया! सत्य यो हो कि यो नुस्खा सुपर राम्रो बाहिर आयो - हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद!
अवश्य पनि तिनीहरू सबै राम्रा छन्
मैले भर्खरै यो बनाएको छु र मैले यसलाई एकदमै सजिलो, छिटो र धेरै राम्रो पाएको छु, मैले यस सामग्रीलाई आधी पारेको छु किनकि यो दुई व्यक्तिको लागि मात्र हो, भोलिको लागि हो, राम्रो हुन्छ? व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद।
टमाटरको साथ कोड
चकलेट कोटिंगको साथ प्लम केक। अती सजिलो!